कोभिड-१९ युवाका लागि बढी खतरनाक – Karnalisandesh
कोभिड-१९ युवाका लागि बढी खतरनाक
प्रकाशित मितिः २१ बैशाख २०७८, मंगलवार ११:०८ May 4, 2021
काठमाडौं। कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहर युवाका लागि बढी खतरनाक साबित भइरहेको छ । यस्ता थुप्रै मामिला देखिइसकेका छन् जहाँ संक्रमित व्यक्तिमा कार्डिएक अरेस्ट र ब्लड क्लटिङको समस्या देखिएको छ। अक्सिजन र औषधीका कमीका कारण पनि स्थिति दिनप्रति भयावह हुँदैछ। यस विषयमा स्वास्थ्य विज्ञले एक भारतीय मिडियासँग बिस्तारमा कुराकानी गरेका छन् ।
यसबारे फार्टिस अस्पतालका अध्यक्ष डा. अशोक शेठले भने, ‘म्युटेन्ट भाइरस अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत बढी संक्रामक भएको छ । अर्को, धेरैजसो युवा जागिर र कुनै आवश्यक कामका लागि बाहिर निस्किरहेका छन् । यसैकारण उनीहरु संक्रमित हुने सम्भावना पनि बढिरहेको छ । त्यसैले पनि यसपटक संक्रमितमा युवाको संख्या बढी छ ।’ डा. सेठले थपे, ‘दुर्भाग्यवश यो भाइरसले मानिसहरुको मुटुको गतिलाई पनि हानी पुर्‍याइरहेको छ । यसले मुटुमा रगत जम्ने समस्या पनि बढाउन सक्छ । यो रगत फोक्सो र धमनीमा पनि जम्न सक्छन् । यस्तो हुँदा बिरामीमा हृदयघातको सम्भावना निकै बढ्ने गर्छ ।’
सिटी स्क्यानको आधारमा डा. त्रेहनले भने, ‘यसपटक भाइरसले मानिसहरुको फोक्सोलाई बढी खराब पारिदिएको छ । ज्वरो र छातीमा गम्भीर संक्रमण देखिएका बिरामीको अक्सिजिनेशन खासै त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । त्यसैले कोही बिरामी अस्पताल छन् र उनीहरुमा गम्भीर लक्षण देखिएको छ भने उनीहरुको कार्डिएक एको पनि गर्नुपर्छ ताकि इन्फ्लेमेशनबाट मुटुको मांसपेशीमा कति असर परेको छ भनेर पत्ता लगाउन सकियोस्।’